प्रधानमन्त्रीकाे थुक र यसकाे समाजशास्त्र, अर्थराजनीति
शहरमा केही दिनअघि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको थुकको चर्चा थियो । उसो त केही दिन बितिसकेको हुनाले यसको चर्चा नगरे पनि हुने हो । तर, जबसम्म निन्दा, घृणा, द्वेष र प्रतिशोधको राजनीति कायम रहन्छ, थुकको प्रयोग र उपयोगिता कायमै रहन्छ । त्यसैले थुक-चर्चा जहिले पनि जायज छ । यो सर्वकालिक विषय हो । उसो त वैज्ञानिक कारणले पनि विश्वबाट मानव सभ्यता नामेट नभएसम्म थुक रहन्छ, थुकको महत्त्व पनि रहन्छ र थुकले बेलाबेला सिर्जना गर्ने आतङ्क पनि रहन्छ ।
यही मेसोमा यहाँ म थुकको इतिहास, यसको समाजशास्त्र र अर्थराजनीतिबारे संक्षेपमा दुई/चार कुरा कहने जमर्को गरेकाे छु ।
म ती प्रथम मानवको अनुहार र व्यक्तित्वको कल्पना गर्ने प्रयास गरिरहेको छु, जसले पहिलो पटक यस सुन्दर धरतीमा थुक्ने परम्पराको सूत्रपात गरे । थुक परम्पराको सुरुवातको इतिहास मानव सभ्यताको प्रारम्भसितै जोडिएको हुनुपर्दछ ।
त्यतिबेला पान या खैनी खाने चलन पक्कै बसिसकेको थिएन । पक्कै अरु नै केही अभक्ष सेवन गरेपछि ती मनुवाको जिब्रो तिक्त भयो होला र उनले हठात् थुक्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरे होलान् । परिवार भन्ने संस्थाको गठन भइसकेको थिएन होला । तिनले पोशाक पनि लगाएका थिएनन् होला ।
भर्खरभर्खर बाँदरबाट मानव बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले शरीरमा रौँ अत्यधिक भएको हुनुपर्छ । अझै अनुमान गर्नुपर्दा ती व्यक्ति पक्कै कुनै घुमन्ते कबिलासित सम्बन्धित हुनुपर्छ । खानाको खोजीमा कबिला सधैँ यत्रतत्र भड्किरहेको हुन्थ्यो होला । त्यतिबेला कुन कुरा खान योग्य, कुन कुरा अयोग्य भन्ने मानवजातिलाई थाहै थिएन होला ।
यस्तोमा योग्य खानेकुराको चयनका लागि पक्कै कबिलामा सरदार भएजस्तै ‘फुड टेस्टर’ पनि हुन्थे होलान् । त्यसरी फुड टेस्ट गर्ने काम जोखिमयुक्त भएकाले फुड टेस्टरहरू आफ्नै कबिलाको सदस्यभन्दा पनि अर्को कबिलासँगको झडपपछि कब्जामा लिइएका शत्रुपक्षका व्यक्ति हुन्थे होलान् । मानव सभ्यताका ती प्रथम चखुवाले निल्नै नसकिने कुनै कुरा खाएर थुक विसर्जन गर्नुपरेको हुन सक्छ ।
पक्कै अरु नाङ्गाभुतुङ्गा कबिलाई यात्रीहरूले जिल्ल परेर निजले थुकेको हेरिरहे होलान् । उनीहरूलाई त्यो दृश्य रमाइलो लाग्यो होला र उनीहरूले पनि निज मनुवाकै अनुसरण गरेर थुकाथुक गर्न थाले होलान् । यसरी एउटाले अर्कोलाई र अर्कोले अर्कोलाई थुक्न सिकाएको हुनुपर्छ र थुकको प्रयोग व्यापक भएर हाम्रो देशको राष्ट्रियसभाको रोष्ट्रमसम्म छ्यालब्याल भएको हुनुपर्छ ।
उसो त थुकको इतिहास रुघाखोकीसित पनि जोडिएको हुन सक्छ । मानवसभ्यताका ती पहिला मनुवा (महिला, पुरुष जो भए पनि) लाई रुघाखोकी लाग्नाको कारण के थियो होला ? सम्भवतः भर्खरभर्खर मानवजातिले बगैँचामा फूल रोप्न थालेको थियो र हावाबाट यताउता हुने फूलहरूको परागकणबाट उत्पन्न एलर्जीकै कारण पनि उनलाई रुघाले मर्मान्तक हुने गरी आक्रान्त पारेको हुन सक्छ ।
नेपाल चुनावैचुनावको खराब गाथाले भरिएको देश हो । हामी नेपाली भोट हाल्न नै जन्मिएका हौँ । यहाँ चुनाव गर्न मिति पुग्नु पर्दैन । बस्, प्रधानमन्त्रीको मुड चले पुग्छ । यहाँ चुनावमा उठ्नेहरूले जनतालाई लडाउन जान्नुपर्छ । जनता लडाउने दुई तरिका नेपालमा प्रचलित छन् । एक, झुक्याएर लडाउने । दुई, दारु ख्वाएर लडाउने ।
रुघाखोकी लागेपछि खकार त आयो नै होला । उनले ख्वाक्क खोके होलान् र मुखमा अनायासै आएको केही नवीन वस्तु मुखमै राखिराख्न सम्भव नभएपछि उनले हठात् थुके होलान् । यसरी थुक्ने कला पहिलोपल्ट सार्वजनिक भयो होला । थुक्नुलाई मानवजगत्‌को प्राचीन कला मान्ने हो भने हाम्रा प्रधानमन्त्री महोदय अर्वाचीन समयका शक्तिशाली कलाकार होइबक्सन्छ ।
समाजमा थुक छ । थुकका कारणहरू छन् । थुकको निवारण भने छैन । बुद्धको ‘दुःख’को फिलोसोफी ‘थुक’को सन्दर्भमा खासै कामलाग्दो देखिन्न । यही मेसोमा गीतकार कृष्णहरि बरालको एउटा गीत सम्झिएँ र त्यही गीतको प्यारोडी मलाई गुनगुनाउन मन लाग्यो:
थुक्ने कसैलाई रहर हुँदैन
मान्छेले नथुकेको शहर हुँदैन... ।
वास्तवमा गाउँका मानिसहरू पनि थुक्छन् । तर, शहरमा चाहिँ थुक देखिन्छ, मानौँ शहरका सडक र भित्ताहरू थुथु गर्नै बनेका हुन् । के थुक्नकै लागि शहरीक्षेत्रमै रोष्ट्रमवाला राष्ट्रियसभा भवन बनाइएको हो ? यी सबैको समाजशास्त्रीय विश्लेषण जरुरी छ । सामान्यतया बुँदागत रूपमा थुकको समाजशास्त्रीय पक्षलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ होला ।
क) गाउँकाे तुलनामा शहरका मानिसहरू शारीरिक श्रम कम गर्ने भएकाले अपचका रोगी बढी हुन्छन् । अपचले मुखमा अम्लीय रसको निर्माण गर्छ र समयक्रममा त्यो रस थुकको रूपमा शहरका सडक र भित्ताहरूमा प्रकट हुन्छ ।
ख) हाम्रो समाजमा चाहिने नचाहिने गफ हाँक्ने प्रवृत्तिलाई ‘खोक्ने’ भन्ने चलन छ । यो चलन कहिलेदेखि प्रचलनमा आयो, यसको भाषाविज्ञानका अध्येताहरूबाट शोध हुनु जरुरी छ । तर, यस्ता गफ सुनेपछि ‘यसले खुब खोक्यो’ भन्ने हामीले यत्रतत्र सुन्दै आएकै वाक्यांश हो । यस हिसाबले गफ र थुकबीच समाजमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले पत्रकारहरूले ‘प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा थुक्नुभयो’ भनेर नकारात्मक भावबोधक समाचार बनाउनुभन्दा ‘प्रधानमन्त्रीले गफ दिनुभयो’ मात्रै भन्दा पनि जनताको सुसूचित हुने अधिकारमा खासै हस्तक्षेप ठहरिने थिएन ।
ग) भालुले पुराण सुन्दैन । तर, मान्छेले त सुन्छ नि । हाम्रो समाजमा सबैका आ-आफ्ना डम्फू र आ-आफ्ना पुराणहरू छन् । सबैका आ-आफ्ना वाद्यवादक, पण्डित र वाचकहरू छन् । पुराणवाचन गर्दा पृष्ठहरू पल्टाइरहनुपर्ने हुन्छ । यसरी वाचन गर्ने पुराणका किताबहरू प्रायः बासी भइसकेका हुन्छन् र तिनका पानाहरू सहज रूपले पल्टिँदैनन् । यस्तो स्थितिमा पाना पल्टाउनका लागि औँलामा थुक लगाउने चलन छ ।
यस अर्थमा समाजमा पण्डित महोदयहरूबाट पनि थुक प्रचलित भएको हुन सक्छ । केही साताअघि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संविधानका भए नभएका धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । यस्तो कुकृत्य गर्नुअघि उहाँले निकै ध्यान दिएर संविधान पढेको हुन सक्छ । यसरी संविधानका पानाहरू पल्टाउन पनि प्रधानमन्त्रीले पक्कै औँलामा थुक लगाउने गर्नुभयो होला । यसरी थुकको प्रयोग व्यापक मात्रामा हुन थालेपछि उहाँको मुखमा थुक उत्पादन ग्रन्थी बढी सक्रिय भएको हुन सक्छ र त्यही कारणले हाम्रो मुलुकको रोष्ट्रम प्रधानमन्त्रीको थुकले ओतप्रोत भएको हुन सक्छ ।
थुकको अर्थराजनीतिक विश्लेषण हुनु जरुरी छ । अर्थविद्हरू यस कार्यमा आजकै मितिदेखि अग्रसर भइहाल्नु न्यायोचित हुनेछ । यो पङ्क्तिकार अर्थविद् त होइन । तर, यससम्बन्धमा सामान्य जिज्ञासु भएकाले पङ्क्तिकारको मथिङ्गलमा सलबलाएका यससम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिहाल्नु सामयिक नै हुनेछ ।
क) देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद पाएर ओम्नी र यतीले यसलाई अझ व्यापक बनाएका छन् । भ्रष्टाचार राष्ट्रवादी कर्म बन्दै गइरहेको यथार्थ अब कसैका सामु लुकेको छैन । भ्रष्टाचार गौरवशाली परम्परा बन्ने मार्गमा अग्रसर भएपछि आर्थिक चलखेल बढी हुनु स्वाभाविक नै भयो । त्यही भएर यहाँ घूस लिन्या र घूस दिन्या चलन बढी भएको हुन सक्छ । अपचको अर्को कारण घूस बढ्ता खानु पनि हो ।
नेपालको चुनावी अभियानमा नोटसँगै थुकको पनि व्यापक महत्त्व छ र रहनेछ । रोष्ट्रममा थुकेर प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्ताहरूलाई ‘जनतालाई लडाएर पनि भोट लिने अभियानमा आजकै मितिदेखि संलग्न भैहाल’ भनेर सङ्केत गरेको हुन सक्छ ।
ख) सरकारले जनताका लागि रोजगारका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेकाले नेपालका मानिस फुर्सदिला हुन्छन् । खाली समयमा जुटपत्ती खेल्न विवश छन् । अभिशप्त छन् । तास खेल्दा स्वाभाविक रूपमा थुकको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ । मुलुकमा थुक प्रचलनमा आउनुको एक मुख्य कारण बेरोजगारी पनि हाे भन्दा फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा थुकेर देशका ती तमाम बेरोजगार श्रमजीवीको पीडाप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरेको पनि हुन सक्छ । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ राजनेताहरूले जनताका पीडा कम गर्न जरुरी छैन । बस्, तिनका दुःखपीडामा ऐक्यवद्धताको ललीपप चुसाइदिए पुग्छ । खासमा यस्तो ललीपपले पनि जनताको एसिडिटी बढाएको हो र हाम्रो समाजमा थुक यत्रतत्र व्याप्त भएको हो ।
ग) नेपाल चुनावैचुनावको खराब गाथाले भरिएको देश हो । हामी नेपाली भोट हाल्न नै जन्मिएका हौँ । यहाँ चुनाव गर्न मिति पुग्नु पर्दैन । बस्, प्रधानमन्त्रीको मुड चले पुग्छ । हामीकहाँको चुनाव खर्चिलो छ । यहाँ चुनावमा उठ्नेहरूले जनतालाई लडाउन जान्नुपर्छ । जनता लडाउने दुई तरिका नेपालमा प्रचलित छन् । एक, झुक्याएर लडाउने । दुई, दारु ख्वाएर लडाउने । चुनावका बेला दारु ख्वाएर जनता लडाउने प्रचलन छ । भोटरलाई दारु र मासु ख्वाएर लडाउन राजनीतिक कार्यकर्ताहरू चुनावका बेला बहुतै सक्रिय हुन्छन् । ती कार्यकर्तालाई नेताले मोटै रकम दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी चुनावका बेला नोटको व्यापक लेनदेन हुन्छ ।
नोट दिँदा र लिँदा गन्ने चलन छ । गन्दा औंलामा थुक लगाउने चलन छ । नोटलाई पानी ट्याङ्कीमा लुकाउनुअघि के कति दरका, के कति नोटहरू छन् भनेर यकिन गर्न पनि थुकेरै गन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले नेपालको चुनावी अभियानमा नोटसँगै थुकको पनि व्यापक महत्त्व छ र रहनेछ । रोष्ट्रममा थुकेर प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्ताहरूलाई ‘जनतालाई लडाएर पनि भोट लिने अभियानमा आजकै मितिदेखि संलग्न भैहाल’ भनेर सङ्केत गरेको हुन सक्छ । यो थुक अभियानले मुलुकमा दूरगामी अर्थराजनीतिक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यस पटक पानी ट्याङ्की र यतीका गोदामबाट निस्किएका नोटहरू थुकसहित गाउँगाउँ पुग्नेछन् । थुकलाई अध्यादेशमार्फत कानुनी स्वरूप दिने सम्भावना पनि प्रबल हुनेछ ।
अबको राजनीति थुकमय हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ३, २०७७, ०६:५३:००